Atletisma: hosokafana amin’ny “Athlétisme pour tous” ny taom-pikatrohana | NewsMada
Atletisma: hosokafana amin’ny “Athlétisme pour tous” ny taom-pikatrohana
Tafiditra tanteraka amin’ny taom-pilalaovana 2019, amin’izao fotoana izao, ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja atletisma. Efa nanomboka tamin’ity volana janoary ity ny fampivondronana andiany voalohany ho an’ireo atleta hiatrika ny lalaon’ny nosy. Atleta miisa 50 no miatrika izany amin’izao ary ny 40 amin’izy ireo no hosafidiana ho an’ny amin’ny lalaon’ny nosy. Ny fifaninanana “Athlétisme pour tous” kosa no hisantarana ny hazakazaka amin’ity taona ity izay hotanterahina eny amin’ny farihin’Anosy, ny alahady 3 febroary 2019, manomboka amin’ny 9 ora maraina. Hazakazaka misokatra ho an’ny sarambabem-bahoaka no hotanterahina mandritra izany. Izay manana salan-taona 8 taona no miakatra no asaina handray anjara amin’ny lalao hazakazaka ary ny 14 hatramin’ny 16 taona kosa ho an’ny “relais inter-écoles”.
Hampiavaka ny fifaninanana ihany koa ny hazakazaka manokana ho an’ny atleta malagasy izay hiainga voalohany. Aorian’izay vao manomboka ny hazakazaka ho an’ny rehetra. Marihina fa mbola misokatra hatramin’ny faran’ny volana janoary izao ny fisoratana anarana ho an’ireo maniry handray anjara.
Manana mpanohana maro ny eo anivon’ny federasiona amin’ny fikarakarana ny lalao rehetra amin’ity taom-pilalaovana 2019 ity, anisan’izany ny Telma sy ny Star izay vonona ny hanohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta. Etsy ankilany, feno dia feno ny fandaharam-potoan’ny FMA amin’ity taona ity, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny FMA.